Azụ anụ ndị Colognes
Ụlọ Akwụsịla anu ulo
Ịmanye pusi ka ọ na-eme ka ọkpụkpụ dị mma dị elu ọ ga-ekwe omume ọ bụghị mgbe niile. Site na eriri aka, ị gakwaghị achọ ilebara anụ ahụ anya mgbe niile.
Ọkpụkpụ cat dị mfe ma dị mma
A na-eji okpukpu siliki ma ọ bụ rọba mee ihe ndị a. Ụkpụrụ nke eji eme ihe dị mfe: a na-agbanye obere nchịkọta ahụike na nsị, mgbe ahụ, a na-etinye ya na mbọ nke anụmanụ ahụ. Ihe nkedi apughi igbari. Ngwaahịa nwere ike ịdị iche iche na agba. A ghaghị iji ihe na-egbochi ndị na-eto eto. Maka ụmụ nwa ruo ọnwa isii, ọ dịghị ihe ọ bụla ha chọrọ, ebe ọ bụ na njiri dị nro ma nwee ihe ịga nke ọma na-agbapụ n'oge egwuregwu. Ndị okenye nke nká adịghị mkpa nchịkwa dị otú ahụ, ha anaghị atụtụ ma ọ bụ na-adịghị ahapụ ha, ha adịghị arụsi ọrụ ike. N'ikpeazụ, ndị baits zuru ezu maka otu ọnwa ma ọ bụ abụọ, n'ikpeazụ njiri na-adaghachi azụ, na ihe ndị na-eme ka ọkpụkpụ na-ada ada.
Ngwaọrụ dị mfe iji rụpụta na iji. Okpokoro dị iche iche dị n'ime 1 mm, akụkụ kachasị oke na oghere bụ 5-6 mm, a na-enye akara n'elu ọnụ. Ọnụahịa ahụ maka claws nwere ike ịdị iche. Size XS - maka mmadụ n'otu n'otu ruo ọnwa isii nwere ibu ruru 2 kilo. S kwesịrị ekwesị maka nwamba 2-4 kg, M - maka anụ ọhịa 4-6 n'arọ, ihe ka ukwuu L - nhọrọ maka nwamba n'elu 6 n'arọ na ọmụmụ Maine Coon .
Ọ bụrụ na ị na-ejighị azụ ndị dị otú ahụ, anụ ahụ agaghị eji ha mee ihe ozugbo. Ụbọchị ole na ole mbụ ọ ga-agba mbọ wepu ha. Okwesiri iburu n'obi na oburu na pusi ma merie ihe a, ike ya adighi n'ihe ize ndụ, ya mere, ihe eji eme ya nwere ihe di nma, nke sitere na isi ihe na-egbuke egbuke.
Echiche ụgha na eziokwu banyere ihe mgbochi nke nkịta
Nke bụ eziokwu bụ na ọkpụkpụ ahụ adịghị emerụ anụ ahụ ahụ, ma ọ naghị eme ka obi dị gị mma dịka o kwere mee. A na-emeghachi ụdị ntu a ugboro ugboro, yabụ mgbe ọ na-achọ ịcha, gị na ngwá ụlọ gị ga-adị mma.
Ụfọdụ ndị ahịa na-arụ ụka na mgbakwasa mgbochi nsogbu bụ nsogbu. N'eziokwu, nke a abụghị eziokwu. A ghaghị itinye ya na ikpere ya, pịa n'elu ohiri isi, gbalịa na mpempe silị na klas, ma ọ bụrụ na ọ dị mma - tinye nko, pịa ya maka 5 sekọnd ma dozie mkpuchi ahụ.
Ọ bụrụ nha buru ibu, belata plastic. Ịgbatị ndụ ọrụ nke ngwaahịa ndị ahụ ga-enyere aka ịmalite ịkpụchasị ntụcha site na 1-2 mm. Ngwakọta ahụ na-abịa zuru ezu na mgbochi. Cheta, ọ na-emejupụta n'ime nanị nke atọ. Iri nkeji zuru ezu iji kpochaa kpamkpam.
Claws na enyere ụmụ anụmanụ aka ịnọ n'elu ala na-amị amị, na-achịkwa mmegharị na nkuku, ịrị elu. Ọ na-esiri ya ike ịkụcha onwe ya n'enweghị ihe mgbochi "oghere". N'agbanyeghi na ha na-eme ihe na-adịghị mma, ha ka na-agbanwe agbanwe, karịsịa na mmalite. Nkịta ahụ enweghị ike ịkwụsị ya ma zoo ya. Nke a nwere ike ime ka ọkpụkpụ na-adaba na ndagwurugwu mgbe ọdịda ahụ gasịrị. Onye na-emepụta na-azọrọ na kit (nkwụnye gbakwunyere na nchịkwa) bụ nnọọ ihe na-adịghị egbu egbu nye anụ. N'okwu ndị na-adịkarịghị, glu nwere ike ime ka mmeghachi omume na-adịghị mma, ya mere, ọ kachasị mma iji hụ na pusi anaghị eloda okpu. Ihe dị n'ime ala bụ eziokwu na abụba, nke a napụtara ya isi nke ntu ahụ, na-agbakọta n'ime ngwaahịa plastik, ire ere na dermatitis nwere ike ịmalite. Ụfọdụ mgbochi "ụda" na-ada ụda mgbe anụ ahụ na-agagharị na-enweghị kapeeti. Nke a nwere ike ime ka iwe na ndị nwe anụmanụ.
Kogtetochka na- eme ka ohere ịnweta ngwá ụlọ gị nọgide na-emebi emebi, ma ọ dịghị ekwe nkwa na ọ ga - esi na ya pụta. Plast plastics nwere ike ịdabere na ya, ma ha nwere nsogbu. Ọnwa ole na ole ị chọrọ ịzụta ndị ọhụrụ, jide n'aka na ha anaghị efe efe. Na-egosi na ka oge na-aga, a ga-eji anụmanụ ahụ mee ihe n'ichekwa ma jide ha oge ọ bụla maka oge dị ogologo ma e jiri ya tụnyere nke gara aga.
Ezigbo ugwo isi - isi nkowa
Rimadyl maka nkịta
Ụdị nkịta kachasị ọnụ
Kedu ụdị okpomọkụ nke anụ ahụ na nkịta?
Nnukwu nkịta n'ụwa
Kwụsị si fleas maka nkịta
Afọ ole ka ọ na-adị ndụ na-agba ndụdụ?
Home parrots - umu
Kedu otu esi ezukọta anụ anụ?
Nri bara ọgaranya na ayodiin
Mbufụt nke gallbladder - ọgwụgwọ
Queen Elizabeth II na ezinụlọ ya gara na mmalite nke agbụrụ Ascot-2016
Nwoke-Ọrịa cancer, nwanyị Capricorn - Mmekọrịta
Nrụgide dị ukwuu n'ime ime
Kedu ka esi amata spoilage?
Salad na prunes na ọkụkọ
Gingivitis Hypertrophic - gịnị bụ mgbaàmà ahụike na otu esi egbochi ya?
Enwere ike ịgbanwe ndụ?
Mkparịta ụka na nkwurịta okwu na nkà mmụta uche - ọdịdị na ụdị
Jam mere si cranberries - uzommeputa
Echiche maka oge ịse foto maka ụmụ nwanyị dị ime
© 2020 ig.everaoh.com